Maamul ka Madax banaan Dowlada Soomaaliya oo looga dhawaaqayo Gobolka Hiiraan – STAR FM SOMALIA
Maamul ka Madax banaan Dowlada Soomaaliya oo looga dhawaaqayo Gobolka Hiiraan
Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Duubabka iyo Ugaasyada gobolka Hiiraan ay qorsheenayaan in ay dhisaan Maamul u gaar ah gobolka Hiiraan kana madax banaan Dowlada Soomaaliya.
Qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dhawaan magaalada Baladweyne lagu caleemo saari doono Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, kadibna ay ka tashan doonaan sidii ay u dhisan lahaayeen maamul Gobol Hiiraan u gaar ah.
Ugaasyada iyo Duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan qaarkood ayaa horey u diiday in ay ka qeyb galaan shirka maamulka loogu dhisayo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe ee gogoshiisa la dhigay magaalada Jowhar, waxa ayna diideen Odayaasha in Hiiraan lagu daro Sh.Dhaxe.
Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Urur goboleedka IGAD ayaa labadaba ku guul dareestay in ay Odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan ku qanciyaan in ay ka qeyb galaan shirka labada gobol maamulka loogu sameenayo.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 20-07-2016
Dad careysan oo ciidamada Amisom ku hor istaagay Isgoyska Soobe